Fanafihana Tamin’ny Asidra Nanjo Ireo Vehivavy Iraniana, Tsy Nisy Fisamborana Herintaona Taty Aoriana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2015 14:51 GMT
Sary avy amin'ny ICHRI ary nampiasàna fahazoandàlana
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tao amin'ny iranhumanrights.org ary avoaka eto noho ny fiarahamiasa miaraka amin'ny Fanentanana Iraisampirenena Momba Ny Zon'olombelona ao Iràna.
Taona iray taorian'ny andianà fanafihana tamin'ny alàlan'ny fitorahana asidra nanjo ireo vehivavy tao Isfahan, tao Iròna, tsy nahasambotra tamingan'olona na iray aza ny polisy sy ny mpitandro ny filaminana, na dia teo aza ny lokaloka matetika nataony hisambotra ireo meloka.
Nilaza tamin'ny Fanentanana Iraisampirenena Momba Ny Zon'olombelona ao Iràna ny renin'ny iray tamin'ireo niharam-boina fa tsy mamoaka mihitsy ho fanta-bahoaka ny vaovao mikasika ny vokatry ny fanadihadiana nataony ireo tomponandraikitra, sady nampitandrina ireo fianakaviana mba tsy hanao fanehoankevitra amin'ny fampahalalam-baovao vahiny.
“Rehefa miezaka ny hanaraka ny raharaha nahazo ny zanakay vavy izahay dia milaza izy ireo fa handray andraikitra mikasika an'io, saingy hatreto tsy misy vaovao nomeny. Ny herinandro vitsivitsy voalohany navitrika tamin'ilay raharaha ry zareo, saingy ankehitriny nihalefy be izany. Tahaka ny hadinon'izy ireo ny mikasika io raharaha io. Manaraka akaiky ny manodidina io raharaha io izahay ary mba handoa ny lany rehetra mikasika ny fahasalaman'ny zanakay vavy ny minisitera. Ankehitriny, ny mba hanasaziana ireo nahavanon-doza tamin'ilay fanafihana tamin'ny asidra no faniriana lehibe indrindra ato aminay ,” Hoy ny filazan'ny renin'ny iray tamin'ireo vehivavy may.
Ny fanehoan-kevitra ofisialy vao haingana indrindra mikasika ny fanafihana ny tamin'ny 29 Septambra 2015 dia avy tamin'i Abdolreza Aghakhani, lehiben'ny Polisim-paritany ao Isfahan, izay mbola nanao fanamby hafa indray fa ho voavaha ny raharaha.
“Ilay fanafihana tamin'ny asidra no raharaha goavana indrindran'ny mpitandro filaminana ao amin'ny Faritanin'i Isfahan. Io irery no tranga nanaovanay fivoriana isankerinandro ary manana mpitsongo dia zà-draharaha manao ireo fanadihadiana izahay. Ankoatr'izay, ireo mpitandro ny filaminana, ahitàna ny Mpiambina Revolisionera ary ny Minisitera Fanangonam-baovao, no misahana ihany koa io tranga io ary matoky aho fa ho voavaha io raharaha io, ” hoy i Aghakhani, araka ny filazan'ny manampahefana avy amin'ny Iranian Student News Agency (ISNA).
Araka ireo tarehimarika ofisialy isan-karazany, eo anelanelan'ny fito sy folo eo ho eo ireo vehivavy niharan'ny fanafihana tamin'ny asidra, izay nanomboka tao an-tanànan'i Isfahan ny volana Oktobra 2014 teo. Na teo aza anefa ireo fampanantenana nataon'ireo tomponandraikitra sy ny Baikon'ny Filoham-panjakana avy amin'i Hassan Rouhani ho an'ireo minisitra telo mba hanadihady ny raharaha sy hisambotra ireo mpanafika, tsy mbola nisy ny voasambotra.
Vavolombelona nanatri-maso ireo fanafihana no nilaza fa nihiaka filazàna ireo lehilahy mpitoraka asidra namely ireo vehivavy lasibatra nolazaina ho miankanjo mahamenatra talohan'ny nanafihana ireo kinendriny.
Henjana ny fifandraisana misy eo amin'ireo fanafihana amin'ny asidra sy ny olana mikasika ny saron-doha manokan'ny silamo, na ny fitafiam-behivavy. Mitombo hatrany ny fifantohan'ireo henjana indrindra ao Iràna, anisan'izany ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta sy ny mpitondra fivavahana mitàna toerana ambony, amin'ny fanitrikitrihana ny fotokevitra fatra-pitahiry ny nentin-drazana momba ny saron-doha ho an'ireo vehivavy Iraniana rehetra, mijery ilay raharaha ho toy ny sedra farany amin'ny tokim-panompoana atao amin'ny Repoblika Islamika.
Nampidirina tao amin'ny Parlemanta Iraniana ny volana Jona 2014, ary avy eo nolaniana tamin'ny 22 Aprily 2015 ny volavolan-dalàna iray, Drafitra mba Hamporisihana Fitondrantena sy Fisorohana ny Ratsy.
Ny drafitra no maniraka mazava ny Basij, milisy iray miasa an-tsitrapo eo ambany fiarovan'ireo piambina Revolisionera Iraniana, mba hanery ny vehivavy Iraniana rehetra hitafy ny hijab araka ny tokony. Amin'ny alàlan'ny antsony ho fampanekena ny Basij, ankininy amin'olona tsy nahazo fiofànana (sy tsy azo tànana ho tomponandraikitra) ny fampihàrana ny lalàna – amin'ny teny hafa, tena mamorona rafitra iray isian'ny fitsaràm-bahoaka io.
Ankoatra izany, maro tamin'ireo mpitondra fivavahana mitàna toerana ambony no nilaza ampahibe-maso fa tsy maintsy tanterahana mihoatra noho ireo fampitandremana am-bava ny fampiharana amin'ny tena izy ny tena hijab. Taloha kelin'ireo fanafihana,nanao toriteny nilaza ireo vehivavy manao “hijab ratsy” ho tsy maintsy hiatrika zavatra maro lavitra noho ny teny fotsiny i Mohammad Taghi Rahbar, mpitarika ny fivavahana isaky ny Zoma Imam ao Isfahan,
Sosokevitra mafy avy amin”ireo vavolombelona nahita maso ny hoe mpiaro ny ara-moraly ireo mpitoraka asidra. Nitranga ireo fanafihana raha mbola niady hevitra mikasika ny Drafitra Famporisihana Fitondrantena sy Fiarovana amin'ny Ratsy ny Parlemanta Iraniana.
Ho fiarovana ilay tolodalàna, nilaza ny Lehiben'ny Fitsarana ao Iràna, Sadegh Amoli Larijani, tamin'ny 26 Oktobra 2014 hoe: “Mazava ho azy, te-hanameloka ireo fanafihana amin'ny asidra ho avy amin'ny Fampiroboroboana ny Hasina sy Fisorohana ny Ratsy ireo Tandrefana sy ireo mpanohitra ny fotokevitra revolisiona. Miala tsiny amin'ireo sasantsasany anaty media eto an-toerana izay manao sahala amin'izany aho.”
Ebrahim Raisi, Lehiben'ny Fampanoavana, nandà koa ny fifandraisana misy eo amin'ilay volavolan-dalàna momba ny Drafitra Fitondrantena sy ireo mpitoraka asidra. “Tsy hanao zavatra tahaka io na oviana na oviana ireo miaramila tsaran'ny finoana Hezbollah,” hoy ny nambarany tamin'ny 23 Oktobra 2014.